बैंकहरुको प्रतिफल दिने क्षमता बढ्यो, इपीएस थोरै हुँदा पनि सेयर मूल्य बढी, कुन बैंकको कति ? – Clickmandu
बैंकहरुको प्रतिफल दिने क्षमता बढ्यो, इपीएस थोरै हुँदा पनि सेयर मूल्य बढी, कुन बैंकको कति ?
क्लिकमान्डु २०७८ वैशाख २० गते १६:३० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना कहरबीच पनि बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) औषतमा बढेको छ ।
गत असार मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकको इपीएस १.३९ रुपैयाँले बढेको हो ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुको इपीएस गत असार मसान्तमा औषतमा १९ रुपैयाँ ६६ पैसा थियो । जुन ९ महिनामा बढेर २१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सो अवधिमा १८ वटा बैंकको इपीएस ४७ पैसादेखि १३ रुपैयाँ २१ पैसाासम्मले बढेको छ भने ९ वटा बैंकको इपीएस ९५ पैसादेखि ११ रुपैयाँ ०७ पैसासम्मले घटेको छ ।
२०७७ असार मसान्तमा कायम रहेको इपीएसमा २०७७ चैत मसान्तमा सबैभन्दा बढी इपीएस प्रभु बैंक १३ रुपैयाँ २१ पैसाले बढेको छ भने सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम नबिल बैंकको ४७ पैसाले इपीएस बढेको छ ।
त्यसैगरी इपीएस घट्नेमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन बैंक ११ रुपैयाँ ०७ पैसा र सबैभन्दा कम बैंक अफ काठमाण्डूको इपीएस ९५ पैसाले घटेको छ ।
चैत मसान्तमा कायम गरेको इपीएसमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४७ रुपैयाँ ४७ पैसा र सबैभन्दा थोरै सेञ्चुरी बैंकको ५ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ ।
बैंकहरुद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सो अवधिमा ३ वटा बैंकको इपीएस ३० रुपैयाँदेखि ४८ रुपैयाँसम्म छ भने ११ वटा बैंकको इपीएस २० रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
साथै, सो अवधिमा ११ वटा बैंकको इपीएस १० रुपैयाँभन्दा बढी र २० रुपैयाँभन्दा कम, २ वटा बैंकको ६ रुपैयाँभन्दा थोरै प्रतिसेयर आम्दानी रहेको छ ।
प्रतिसेयर आम्दानी भनेको के हो ?
करपछिको नाफालाई कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा आउने प्रतिफललाई नै प्रतिसेयर आम्दानी भनिन्छ । यो लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने आधार पनि हो ।
यसले कम्पनीको मुनाफा आर्जनको क्षमता देखाउने हुँदा कम्पनीको आधारभूत पक्षको विश्लेषणको प्रमुख सूचकका रुपमा लिइन्छ । प्रतिसेयर आम्दानीले कम्पनीले प्रत्येक सेयरबाट संकलित पुँजी परिचालन गरेर कमाएको नाफालाई वित्तीय तथ्यांकमा व्यक्त गर्दछ ।
जस्तै, कुनै कम्पनीको एक वर्षको आम्दानी १ हजार रुपैयाँ छ र कम्पनीको सेयर संख्या १ सय छ भने कम्पनीको एक कित्ता सेयर बराबरको आम्दानी भनेको १० रुपैयाँ हुन आउँछ । उक्त आम्दानीमा पनि कम्पनीले निश्चित रकम जगेडा कोषमा राख्छन् । त्यसैले प्रतिसेयर आम्दानी जति धेरै भयो, त्यति नै राम्रो मानिन्छ ।
बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी थोरै हुँदा प्रतिसेयर मूल्य बढी
कुनैपनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा त्यो कम्पनीले लगानीको प्रतिफल कति दिन्छ र त्यो कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी कति छ हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी गरिने कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीको मूल्यांकन नै नगरी लगानी उचित प्रतिफल पाइदैँन । कम्पनीको मूल्यांकन नै नगरी लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गर्दा थोरै प्रतिसेयर आम्दानी भएका कम्पनीहरुको समेत बजारमा धेरै मूल्य पुगिसकेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाउने जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय थोरै प्रतिसेयर आम्दानी भएका बैंकहरुको समेत सेयर मूल्य भने उच्च रहेको छ ।
०७८ बैशाख १६ गतेसम्मको प्राप्त तथ्यांक अनुसार सो समयमा सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य नबिल बैंकको छ । जबकी बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने ०७७ चैत मसान्तसम्म ३७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ ।
चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा थोरै प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको सेञ्चुरी बैंकको समेत प्रतिसेयर मूल्य २ सय ३३ रुपैयाँ कायम छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको नीति लिएपछि पछिल्लो समय बजारमा मर्जरको चर्चा चुलिएको छ । कमजोर वित्तीय अवक्षा र लगानीको प्रतिफल दिने क्षमता कम भएका बैंकहरुको मर्जर बलियो बैंकसँग चल्दा हल्लाको पछि लाग्ने लगानीकर्ता सेयर खरिद चाप बढाएर मूल्य बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
ट्राफिक जाम घटाउन कोटेश्वर-जडिबुटीमा अण्डरपास बनाइने
युवराज खतिवडाको राजश्व नीति, जसलाई विष्णु पौडेलले उल्टाए
नेपालमै पहिलो पटक पोखरामा शुरु हुँदैछ ‘स्काइ डाइभिङ’, खर्च प्रतिव्यक्ति ९० हजार
२७ वर्षमा २५औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा कामी रिता शेर्पा
४०० अक्सिजन सिलिण्डर र २० भेन्टिलेटर लिन सोमबार चीन जाँदै नेपाल एयरलाइन्स
बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अभियुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
करिब साढे ६ किलो सुनसहित २ भारतीय पक्राउ
बैंक तथा वित्तीय संस्था कतै बन्द, कतै आलोपालो
कसरी बन्ने सफल ? विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा र हेमराज ढकालका सफलताका महत्वपूर्ण शूत्र